Waa maxay saamaynta kuleylka adduunka? | Saadaasha Shabakadda
Mustaqbalka muxuu hayaa? Tani waa su’aasha in kabadan hal iyo in kabadan oo naga mid ah ay isweydiiyeen waqti ka waqti, waana in cimilada aduunku ay waxbadan iska badalayaan oo aad u dhakhso badan. Ama, halkii, waxqabadka aadanaha, isaga oo og ama miyir la'aan ah, ayaa wax ka beddelaya.
Diiwaanada ayaa la jabiyaa bil kasta, taas oo walwal leh. Waxay umuuqataa in celceliska heerkulka uu sii kordhayo, iyadoo aan loogu talagalin hoos u dhac. Hadda, mahadsanid maqaal ku soo baxay joornaalka New York, waan ogaan doonnaa waa maxay "belaayadu" ama saamaynta kuleylka adduunka taas ayaa inta badan saameyn nagu yeelan doonta muddada dhexe iyo tan fog.
1 Dhimashada kuleylka
2 Dhammaadka cuntada
Tirada kiisaska dhimashada kuleylka ayaa kordhin doonta oo kaliya. Bini'aadamku, sida xayawaanada kale, waa xayawaan awood u leh xakamaynta heerkulka jidhkeena ... laakiin illaa xad: marka heerkulka bannaanka uu aad u sarreeyo, haddii aynaan fuuqbixin nagu filan waxaan ku dhiman karnaa waqti aan dheerayn.
Sidaa darteed, xitaa haddii aan u hoggaansameyno Heshiiska Paris oo aan ka hortageyno celceliska heerkulka adduunka ee ka badan laba darajo, magaalooyin badan ayaa sii ahaan doona kuwo aan la noolaan doonin.
Dhamaanteen, xoolaha iyo dhirta, waxaan ubaahanahay biyo si aan u noolaano. Laakiin hoos u dhaca roobka wuxuu halis gelin doonaa xoolaha iyo beeraha, kuwaas oo ah howlo aasaasi u ah bini-aadamnimada inay sii jirto. Markay tahay 2100, si kastaba ha noqotee, dadka wax badan ayaa koray (waxaa lagu qiyaasaa inaan gaari doono 10 bilyan), laakiin waxaa jiri doona cunno yar.
Abaaruhu waxay noqon doonaan kuwo aad u daran; aad u badan marka la gaaro 2080 koonfurta Yurub waxay ku jiri kartaa xaalad abaar daran oo joogto ahCiraaq, Siiriya iyo Bariga Dhexe badankood waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin badan oo gaarsiinta dadka oo dhan.
Markii cunto iyo biyo la waayo, dadku waxay u muuqdaan inay isku dhacaan. Waxaan xaq u leenahay inaan helno raashin joogto ah, laakiin hadii kheyraadkan ay yar yihiin, inta badan ma lihin wax kale oo aan ka aheyn inaan u haajirno raadinta meel ka wanaagsan ama joogno oo aan isku dayno inaan helno wax aan afka u ridan karno.
Haddii celceliska heerkulka kor u kaco shan darajo, dagaalladu waxay noqon lahaayeen "rootigeenna maalinlaha ah."
Si aad u aqriso daraasadda oo dhan, waad awoodid halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay saamaynta kuleylka adduunka?
WAXAAD RABTAA IN AAD KA JIRTO DIIRIGELINTA CAALAMIGA AH, waxaad rabtaa inaad qorraxda ku daboosho far
MARKA AY qorraxdu tahay wakiilka ugu weyn ee soo ifbaxa cimilada adduunka, PLUS ANTIVALORS SIDA SIDAN: «EGOISM, PREPOTENCE, ANTAGONISM, Nacayb, Cunsuriyad»
WAA DHAQANKA DHAQANKA IYO SIYAASADDA EE SOO KORDHIYA CIMILADA CAALAMKA. BULSHADU waxay la mid yihiin kooxaha Bini’aadamka ee iyagu ku abuuray abuurta horudhac adduunyo guud oo aan ka mid ahayn kuwa ku andacooday inay iyagu leeyihiin. KU SAABSAN DADKA IYO KHAYRAADKA KASTA EE CAALAMKU SIIYAY SIDA: DHULKA, CARRADA IYO BADAHA NOLOSHA AADAMAHA, QARAXA IYO BADBAADINTA KHAYRAADKA BADAN EE DEEGAANKA AAN UU KU HABOONAYN INAAD NOOLATO ... MUUQAALKA LA FILAYO OO LAGU SHIDAY BILAASHKA Kitaabka Quduuska ah .. MA AHA DHAMMAADKA ADDUUNKA… WAA UGU DANBAYNTA AADANAHA. IYO NOLOSHA SIDII AAN KU OQNO.
Jawaab OSCARIÑO OSHORIO